ဗီရာကို အလဲထိုးပြီးနောက် UFC ပြိုင်ပွဲရဲ့ အကြမ်းဆုံး - Myitter
October 15, 2019 Myitter အားကစားသတင်း 0
အောင်လ Vs ခါဘစ် ပွဲ တကယ် ဖြစ်လာ နိုင်လား ?
မနေ့ညက One Championship ပြိုင်ပွဲမှာ အောင်လကတော့ စိန်ခေါ်သူ လည်းဖြစ်၊ သူ့ထက် ဝိတ်တန်း နှစ်ခုလည်း မြင့်တဲ့ ဗီရာကို ဒိုင်ပွဲရပ်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား အနိုင်ထိုးသတ် ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲပြီးနောက် အောင်လ လည်း ONE မှာ အမြင့်ဆုံးနဲ့ အအောင်မြင်ဆုံး ဖိုက်တာ တစ်ယာက် ဖြစ်လာပြီး ONE မှာတော့ ပြိုင်ဘက် ကင်းသွားပြီလို့ ဆိုနိုင်တယ်။
ONE Championship ပြိုင်ပွဲဟာ စတင် ကျင်းပခဲ့တာ မကြာသေး တဲ့အပြင် အာရှဘက်မှာပဲ လူကြိုက်များပြီး အနောက်တိုင်း နာမည်ကြီး MMA ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ UFC ပြိုင်ပွဲနဲ့တော့ အဆင့်အတန်းချင်း ကွာနေပါသေးတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ONE ဟာ အချိန်တိုအတွင်း အာရှကို လွှမ်းမိုးလာတဲ့နောက် UFC ကို ပခုံးချင်း ယှဉ်နိုင်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေ ခပ်သွက်သွက် လှမ်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒီခြေလှမ်းတွေမှာ အရေးပါ တာကတော့ အာရှ ပရိတ်သတ် အများစုကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အောင်လပါ။
ခုချိန်မှာ ဆိုရင် ONE မှာ အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်း အောင်လ ကို အခြေပြုပြီး ONE တာဝန် ရှိသူတွေအနေနဲ့ UFC နဲ့ နီးကပ်အောင် လုပ်လို့ ရတဲ့ အခွင့်အရေး တစ်ရပ် ရှိလာပါတယ်။ ဒါကတော့ အောင်လလိုပဲ UFC မှာ ပွဲအဆူဆုံး နာမည်ကြီး ဖိုက်တာ ခါဘစ်နဲ့ အောင်လတို့ကို သံဆန်ခါ ကွင်းထဲမှာ မျက်နှာချင်း ဆိုင်ပေးတာ မျိုးပါ။
ဒီပွဲ ဖြစ်ဖို့ အတွက် တစ်ခုထဲသော အခက်အခဲကတော့ ဖိုက်တာ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဝိတ်တန်းပါပဲ။
အအာင်လက Middleweight ဖြစ်ြ့ပီး ခါဘစ်က Lightweight ဖြစ်နေလို့ပါ။ အရပ်ကလည်း အောင်လ (၃)လက်မ မြင့်ပါတယ်။ ONE နဲ့ UFC ဘက်က ဝိတ်တူတဲ့ ဖိုက်တာ နှစ်ယောက်ကို ပွဲတည်လို့ ရပေမယ့် ကျော်ကြားမှု အပိုင်းမှာ အောင်လနဲ့ ခါဘစ် ပွဲကို မှီမှာ မဟုတ်သလို ငွေကြေးအမြတ်အစွန်းပိုင်းပါ ကွာသွားပါမယ်။
ါကြောင့် ဝိတ်တန်း ကွာပေမယ့် အောင်လနဲ့ ဗီရာ ပွဲလို ဝိတ်တန်း ညှိထိုးရင်တော့ ရနိုင်ချေ ရှိပါတယ်။ အောင်လက (၈၃) ကီလို ဖြစ်ပြီး ခါဘစ်က (၇၀) ကီလို ဖြစ်တာကြောင့် နှစ်ယောက်လုံး (၇၆) ကီလို ကီလိုလောက် ညှိထိုးလို့ မရစရာ မရှိပါဘူး။ ဒီကီလိုတန်းမျိုးကို ခါဘစ် ထိုးခဲ့ဘူးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီပွဲက MMA ဖိုက်တာ အချင်းချင်း ထိုးမယ့် ပွဲပါ။ အရင်က ဘောက်ဆင်သမား မေဝဲသာနဲ့ MMA သမား မက်ဂရီပေါ်လို မတူညီတဲ့ နယ်ပယ်က ဖိုက်တာနှစ်ယောက်တောင် ပွဲဖြစ်ခဲ့သေးပဲ။ဒါ့အပြင် မေဝဲသာနဲ့ ဂျပန်က ဘောက်ဆင် သမားလည်း ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးတယ်။အဓိကက စပွန်ဆာနဲ့ ငွေပါပဲ။ဒီနှစ်ခုလုံးက ONE ရော UFC မှာပါ အလျှံအပယ် ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အောင်လနဲ့ခါဘစ်ပွဲ ဖြစ်လာ နိုင်ခြေ အများကြီး ရှိနေပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီပွဲ ဖြစ်လာ ခဲ့ရင်တော့ ONE ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို UFC နဲ့ ရင်ပေါင်တန်းမယ့် အကောင်းဆုံးပွဲ ဖြစ်လာ နိုင်သလို အရှေ့တိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်းက ဖန်တွေ သန်းချီး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဖိုက်တာ နှစ်ယောက်ပွဲ ဖြစ်လို့ ငွေကြေးအရပါ အကြီးအကျယ် အောင်မြင်မယ့် ပွဲ ဖြစ်လာမှာ ဆိုတော့ ONE ရော UFC ရော ဒီလို အခွင့်အရေးကို လိုချင်ကြမှာပါ။Top One Sportswear
အောငျလ Vs ခါဘဈ ပှဲ တကယျ ဖွဈလာ နိုငျလား ?
မနညေ့က One Championship ပွိုငျပှဲမှာ အောငျလကတော့ စိနျချေါသူ လညျးဖွဈ၊ သူ့ထကျ ဝိတျတနျး နှဈခုလညျး မွငျ့တဲ့ ဗီရာကို ဒိုငျပှဲရပျနဲ့ ပွတျပွတျသားသား အနိုငျထိုးသတျ ခဲ့ပါတယျ။ဒီပှဲပွီးနောကျ အောငျလ လညျး ONE မှာ အမွငျ့ဆုံးနဲ့ အအောငျမွငျဆုံး ဖိုကျတာ တဈယာကျ ဖွဈလာပွီး ONE မှာတော့ ပွိုငျဘကျ ကငျးသှားပွီလို့ ဆိုနိုငျတယျ။
ONE Championship ပွိုငျပှဲဟာ စတငျ ကငျြးပခဲ့တာ မကွာသေး တဲ့အပွငျ အာရှဘကျမှာပဲ လူကွိုကျမြားပွီး အနောကျတိုငျး နာမညျကွီး MMA ပွိုငျပှဲဖွဈတဲ့ UFC ပွိုငျပှဲနဲ့တော့ အဆငျ့အတနျးခငျြး ကှာနပေါသေးတယျ။
ဘယျလိုပဲ ဖွဈဖွဈ ONE ဟာ အခြိနျတိုအတှငျး အာရှကို လှမျးမိုးလာတဲ့နောကျ UFC ကို ပခုံးခငျြး ယှဉျနိုငျဖို့ ခွလှေမျးတှေ ခပျသှကျသှကျ လှမျးလာခဲ့ပါတယျ။ဒီခွလှေမျးတှမှော အရေးပါ တာကတော့ အာရှ ပရိတျသတျ အမြားစုကို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့အောငျလပါ။
ခုခြိနျမှာ ဆိုရငျ ONE မှာ အကြျောကွားဆုံးနဲ့ ပွိုငျဘကျကငျး အောငျလ ကို အခွပွေုပွီး ONE တာဝနျ ရှိသူတှအေနနေဲ့ UFC နဲ့ နီးကပျအောငျ လုပျလို့ ရတဲ့ အခှငျ့အရေး တဈရပျ ရှိလာပါတယျ။ ဒါကတော့ အောငျလလိုပဲ UFC မှာ ပှဲအဆူဆုံး နာမညျကွီး ဖိုကျတာ ခါဘဈနဲ့ အောငျလတို့ကို သံဆနျခါ ကှငျးထဲမှာ မကျြနှာခငျြး ဆိုငျပေးတာ မြိုးပါ။
ဒီပှဲ ဖွဈဖို့ အတှကျ တဈခုထဲသော အခကျအခဲကတော့ ဖိုကျတာ နှဈယောကျရဲ့ ဝိတျတနျးပါပဲ။
အအာငျလက Middleweight ဖွဈွ့ပီး ခါဘဈက Lightweight ဖွဈနလေို့ပါ။ အရပျကလညျး အောငျလ (၃)လကျမ မွငျ့ပါတယျ။ ONE နဲ့ UFC ဘကျက ဝိတျတူတဲ့ ဖိုကျတာ နှဈယောကျကို ပှဲတညျလို့ ရပမေယျ့ ကြျောကွားမှု အပိုငျးမှာ အောငျလနဲ့ ခါဘဈ ပှဲကို မှီမှာ မဟုတျသလို ငှကွေေးအမွတျအစှနျးပိုငျးပါ ကှာသှားပါမယျ။
ါကွောငျ့ ဝိတျတနျး ကှာပမေယျ့ အောငျလနဲ့ ဗီရာ ပှဲလို ဝိတျတနျး ညှိထိုးရငျတော့ ရနိုငျခြေ ရှိပါတယျ။ အောငျလက (၈၃) ကီလို ဖွဈပွီး ခါဘဈက (၇၀) ကီလို ဖွဈတာကွောငျ့ နှဈယောကျလုံး (၇၆) ကီလို ကီလိုလောကျ ညှိထိုးလို့ မရစရာ မရှိပါဘူး။ ဒီကီလိုတနျးမြိုးကို ခါဘဈ ထိုးခဲ့ဘူးပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဒီပှဲက MMA ဖိုကျတာ အခငျြးခငျြး ထိုးမယျ့ ပှဲပါ။ အရငျက ဘောကျဆငျသမား မဝေဲသာနဲ့ MMA သမား မကျဂရီပျေါလို မတူညီတဲ့ နယျပယျက ဖိုကျတာနှဈယောကျတောငျ ပှဲဖွဈခဲ့သေးပဲ။ဒါ့အပွငျ မဝေဲသာနဲ့ ဂပြနျက ဘောကျဆငျ သမားလညျး ကွိုးဝိုငျးထဲမှာ ရငျဆိုငျခဲ့ဘူးတယျ။အဓိကက စပှနျဆာနဲ့ ငှပေါပဲ။ဒီနှဈခုလုံးက ONE ရော UFC မှာပါ အလြှံအပယျ ရှိနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အောငျလနဲ့ခါဘဈပှဲ ဖွဈလာ နိုငျခွေ အမြားကွီး ရှိနပေါတယျ။
တကယျလို့ ဒီပှဲ ဖွဈလာ ခဲ့ရငျတော့ ONE ရဲ့ ဂုဏျသိက်ခာကို UFC နဲ့ ရငျပေါငျတနျးမယျ့ အကောငျးဆုံးပှဲ ဖွဈလာ နိုငျသလို အရှတေို့ငျးနဲ့ အနောကျတိုငျးက ဖနျတှေ သနျးခြီး ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဖိုကျတာ နှဈယောကျပှဲ ဖွဈလို့ ငှကွေေးအရပါ အကွီးအကယျြ အောငျမွငျမယျ့ ပှဲ ဖွဈလာမှာ ဆိုတော့ ONE ရော UFC ရော ဒီလို အခှငျ့အရေးကို လိုခငျြကွမှာပါ။Top One Sportswear